Soo ogow xeebta ugu fiican ee qaawan ee Tenerife | Wararka Safarka
Xeebaha qaawan ee Tenerife
Susana Garcia | | General, Xeebaha, Tenerife
La Jasiiradda Tenerife waa mid ka mid ah meelaha loogu doon doonista badan yahay dalka Spain cimilada diiran ee weyn sanadka oo dhan iyo tirada badan ee xeebaha leh. Qaar badan oo ka mid ah kuwani waa xeebo qaawan waxayna kuu oggolaaneysaa inaad si aamusnaan ah u sameyso adiga oo aamusan qorraxda iyo dabaasha wanaagsan. Haddii aad booqanayso jasiiradda waxaad u baahan kartaa inaad wax yar ka ogaato xeebta qaawan ee ay leedahay iyo waxay bixiyaan.
ka xeebaha qaawan waxaa laga yaabaa inay bixiyaan qaawan oo bilaash ah ama noqon meelo banaan oo si qaawanaan ah loogu sameeyo si qaawan Intooda badani waxay kuu oggolaanayaan inaad si xor ah u doorato cidda booqanaysa, inaad ku raaxaysato dhammaan xulashooyinka. Waan arki doonaa waxa jasiiradda Tenerife ee ku taal Canary Islands ay noogu deeqi karaan marka laga hadlayo xeebaha qaawan.
1 Xeebta La Tejita
2 Xeebta Los Morteros
3 Xeebta La Pelada
4 Xeebta Badda Cas
5 Xeebta Patos
6 Xeebta Las Gaviotas
7 Xeebta Benijo
Xeebta La Tejita
La Tejita waa xeebta bacaadka ah ee ku ag fidsan Buurta Cas, taas oo ah mid ka mid ah astaamaha ugu caansan jasiiradda ee laga arki karo hawada. Xeebtani waxay u taagan tahay biyaheeda nadiifka ah iyo inay tahay meel lagu fuulo, maadaama badanaa ay leedahay mowjado iyo dabeylo. Goob ay tahay in la booqdo, in kasta oo ay jiraan xeelal badan oo gooni u goosad ah, laakiin sikastoo ay ahaataba waxay u taagan tahay muuqaalka dhulka ay ku taal iyo ka mid ahaanshaha kuwa ugu caansan.
Xeebta Los Morteros
Xeebtani waxay ku taalaa bad yar, sidaa darteed way ka dhowdahay kana soo dhaweyn badan tahay kuwa kale ee waaweyn. Waxay ku taal meel u dhow Aagga Dabiiciga ah ee Dhagaxyada La Caleta iyo magaalaynta oo isku magac ah, taas oo ah meesha ugu haboon ee lagu nagaado. Damacaani waa mid go'doonsan haddii aan barbar dhigno kuwa kale laakiin waa mid aad u wanaagsan oo deggan, sidaas darteed waa u qalantaa. Waa meel dabiici ah oo la ilaaliyo sidaas darteedna waxaan isku arki doonnaa jawi aad u qurux badan oo qaawanaanta lagu dhaqmi karo. Intaa waxaa sii dheer, waxay bixisaa biyo nadiif ah oo nadiif ah oo ku habboon snorkeling ama quusin.
Xeebta La Pelada
Jasiiraddani waxay leedahay dhulal badan oo ay ugu wacan tahay nabaad-guurka badda ee dhagaxa volcano sanadihii la soo dhaafay, sidaa darteed waxay na siineysaa meelo badan oo aan ugu sameyn karno qaawinta hab deggan Xeebta La Pelada waxay ku taal meel u dhow aagga El Médano waana waab yar oo u dhexeeya dhagaxyada leh ciidda caadiga ah ee madow ee jasiiradda dhererkeeduna yahay 80 mitir. Waa wax yar laakiin raaxo leh, ma laha adeegyo laakiin waxaad uga tagi kartaa gaarigaaga agtiisa sidaas darteed waxay noqon kartaa ikhtiyaar wanaagsan haddii aadan rabin inaad socod badan sameyso.
Xeebta Badda Cas
Xeebtaan waa la arki karaa markaad jasiiradda timaaddo maxaa yeelay waxay ku dhowdahay garoonka diyaaradaha. waan ogahay ku saabsan fulkaano la yiraahdo Buurta Cas taasi runti waa astaamo taasi oo ka dhex muuqata dhulka. Xeebtani waxay sidoo kale na siineysaa suurtagalnimada inaan ku sameysano qaawinta jawi muuqaal dabiici ah oo aanan ka heli karin Jasiiradda, sidaa darteed waa inaynaan ka waabanin inaan u dhowaanno. Cove-ka loo yaqaan Playa de Montaña Roja waa meel aad uga dhow xeebta La Tejita oo ku fidsan buurta agteeda oo si fiican loo yaqaan. Labadaba waad sameyn kartaa qaawanaan inkasta oo hungurigan yar ee kuyaala aagga dhagaxa leh uu yahay mid soo dhawayn badan.
Tani waa a xeebta duurjoogta ah ayaa loo arkaa mid ka mid ah kuwa ugu quruxda badan Tenerife si loogu dhaqmo qaawanaanta. Biyo saafi ah, ciid mugdi ah iyo buuro cagaaran oo taagan oo abuura isku-dhaf aan caadi ahayn oo midabbo ah oo runtii qurux iyo cajaa'ib leh. Waxay ku taal meel u dhow xeebta Ancón, oo ay u kala go'do gees. Xeebtaan Orotava runtii way qurux badan tahay laakiin waa inaad taxaddar muujisaa markaad ku maydhanaysid biyaha hoostooda sidaa darteed kuma habboona qoysaska.
Xeebta Las Gaviotas
Haddii aad soo dhaafto xeebta Teresitas, oo caan ka ah jasiiradda, waa inaad ku istaagtaa Playa de las Gaviotas, halkaasoo loo oggol yahay qaawanaanta. Way ku wareegsan tahay Qaar ka mid ah buuraha quruxda badan iyo qaawanaanta waa bilaash, taasi waa, waxaan xiran karnaa dharka dabaasha ama maya. Cilladaha keliya ee jira ayaa ah in hirarka sare ay yar yihiin, laakiin haddii aan ku kacno hirar hoose waxaan ku raaxeysan karnaa si aad uga wanaagsan. Dhererkeedu waa 250 mitir oo keliya laakiin waa xeeb ka fog dhismayaasha dalxiiska ee aagga deggan, waana taas tan ugu habboon inay ku raaxeysato maalin nasasho xeebta.
Xeebtani runtii waa mid caan ah oo taagan waxaa qoray Roque Benijo iyo Roque la Rapadura. Waa muuqaal caan ah oo Tenerife ah iyo waliba xeeb kale oo loogu talagalay qaawinta. Xeeb duurjoog ah oo leh ciid madow iyo hirar badan oo aynaan seegi karin markaan jasiiradda aadno. Sidoo kale waa meesha ugu fiican ee lagu raaxeysto gabbal dhaca.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » General » Xeebaha qaawan ee Tenerife